Ogaden News Agency (ONA) – Maraykanka oo 52 Al-Shabaab Ah Duqayn Ku Dilay.
Maraykanka oo 52 Al-Shabaab Ah Duqayn Ku Dilay.
Posted by Dayr	/ January 20, 2019
Taliska ciidamada Maraykanka ee loosoo gaabiyo Africom ayaa war saxaafadeed ay soo saareen waxay ku sheegeen in 52 xubnood oo ka tirsan ururka Alshabaab ay ku dileen duqayn ay ka gaysteen gobolka jubada hoose ee Soomaaliya.
Africom waxay war saaxafdeedkooda ku sheegeen in weerarkan ay Alshabaab ku qaadeen uu jawaab u ahaa weerar ay ku Alshabaab ku qaadeen fadhiisin ay deegaanka Sanguuni ku lahaayeen ciidamada Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedka Jubaland.
Africom waxay sheegtay in ay weerar la beegsadeen gaari ay saarnaayeen xubno ka tirsan ururka Alshabaab sidoo kalena waxay xaqiijiyeen in dadka shacabka ah aan wax khasaare ah ka soo gaarin waa sida ay hadalka u dhigeene.
Africom waxay sheegtay in ay sii wadi doonto la dagaalanka Alshabaab, ayna xoojin doonto wadashaqaynta ay la leedahay dawlada iyo maamulada. Ciidamada dawlada ayaa sheegtay in khasaare baaxad leh ay u gaysteen ururka Alshabaab, sidoo kalena waxa ay soo bandhigeen gaari loo diyaariyay in uu qarxo.